रिमाको प्रश्न – नागरिकलाई सुरक्षा दिनुको सट्टा सास्ती दिन खोज्ने प्रहरी कसरी मेरो साथी हुनसक्छ ? - Mitho Khabar
रिमाको प्रश्न – नागरिकलाई सुरक्षा दिनुको सट्टा सास्ती दिन खोज्ने प्रहरी कसरी मेरो साथी हुनसक्छ ?
January 23, 2020 mithokhabarLeaveaComment on रिमाको प्रश्न – नागरिकलाई सुरक्षा दिनुको सट्टा सास्ती दिन खोज्ने प्रहरी कसरी मेरो साथी हुनसक्छ ?
गायिका आस्था राउतको विमानस्थल प्रकरणमा कलाकर्मीहरुले मुख खोल्न थालेका छन् । केही दिनसम्म मौन बसेका कलाकार्मीहरु अहिले सामाजिक संजालमार्फत अगाडि आएका हुन् । यही क्रममा नायिका तथा मोडल रीमा विश्वकर्माले पनि आस्था राउत प्रकरणमा आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेकी छिन् । उनले, नागरिकलाई सुरक्षा दिनुको सट्टा सास्ती दिन खोज्ने प्रहरी कसरी मेरो साथी हुनसक्छ ? भनेर पनि प्रश्न गरेकी छिन् ।
रीमा लेख्छिन्–‘देशमा दिनानु दिन जघन्य अ’पराध घटिरहँदा अनी ठूला अ’पराधी रिट र तारिखमा खुलेआम हाम्रै वरपर घुमिरहँदा त्यसै त हामी असुरक्षित छौं । अझ, विमानस्थलको सामान्य नोकझोकलाई लिएर नागरिकविरुद्ध मुद्दामा ओर्लिएको प्रहरी संगठनले आम नागरिकमा प्रहरी प्रशासनमाथि विश्वास भन्दा बढी ड’र पैदा गरेको छ ।’ रीमाले सामान्य घ’टनालाई मुद्दामा लैजाने प्रहरीले ठूला ठूला घ’टनामा भने मौनता देखाएको भन्दै आ’लोचना गरेकी छिन् ।
June 23, 2020 June 23, 2020 mithokhabar